Mucjisaddii Maraykanku Ku Helay Safarka Qasem Soleimani Iyo Jaajuusiyaddii Xogta Bixiyey | Aftahan News
Mucjisaddii Maraykanku Ku Helay Safarka Qasem Soleimani Iyo Jaajuusiyaddii Xogta Bixiyey
Baqdaad, (Aftahannews)-Jaajuusiin la shaqeeya Mareykanka oo ku kala sugan garoomada diyaaradaha ee Damascus iyo Baghdad ayaa ka caawiyey Mareykanka inuu helo xogta safar ee Jeneral Qasem Soleimani, kadibna dilo, waxaa sidaa werisay wakaaladda wararka Reuters.
Soleimani iyo afar ilaalo ah oo ka tirsan Ciidamada Kacaanka Islaamiga ah, ayaa diyaaradda Cham Wings ka soo raacay magaalada Damascus, kadibna soo aaday Baghdad.
Sidaa oo ay tahay, Soleimani ayaa markii uu yimi Baghdad, oo ay soo galbniyeen kolonyo ka kooban laba baabuur, waxaa lagu dhuftay laguna dilay gantaal ay soo rideen Mareykanka.
Baadhayaasha Iran ee kiiskan ayaa rumeysan in dad ka shaqeeya garoomada diyaaradaha ee Baghdad iyo Damascus balse si hoose jaajuusiin ugu ah Mareykanka ee gudbiyeen xogtiisa.
Baadhitaanka kiiskan ayaa waxaa hoggaaminaya Falih Al-Fayadh oo ah la-taliyaha amniga qaranka Iran.
Hay’adda sirdoon Iran ayaa rumeysan in lixdan qof, oo aan weli la xidhin, ay qeyb ka yihiin shabakad jaajuusiin ah, oo si hoose ula shaqeeya Militariga Mareykanka, islamarkaana u gudbiya xogaha muhiimka ah.
Natiijada horudhaca ah ee baaritaanka ayaa muujineysa in xogtii ugu horreysay ee Soleimani ay soo gudbiyeen kooxda garoonka diyaaradaha Damascus, sida uu sheegay sarkaal amni.
Markii intaa xog ah loo gudbiyey Mareykanka, durba waxaa soo kacday diyaarad drone ah, oo dhowr gantaal ku dhufatay kolonyada uu la socda Soleimani, oo uu ka mid ahaa Abu Mahdi Muhandis, oo ahaa hoggaamiye ku-xigeenka kooxda Shiicada ee Al-Shaxd Al-Shacab ee dalka Iraq. Guud ahaan waxaa goobta ku dhintay labadooda iyo 8 qof oo kale oo ilaalo ahaa.